Mboro yemurume wangu haigone kunditundisa! - Nhau Dzevakuru
Tete, ndine 19 months ndaroorwa asi ndine dambudziko rekuti murume ndomuda chose uye iye anondida asi pabonde handisviki chaipo ipo nemboro yake, but ndiri ndega ndinosvika pakutunda. Murume ane zvese zvakakwana uye anoshanda basa. Ini ndini ndine dambudziko.
Mhinduro yangu, murume kana wati anokuda, iwe uchimuda, zvoreva kuti munofanira kushanda pamwe chete kugadzirisa nyaya dzenyu. Kuti murume anzi anogona basa anofanira kumboita nguva muchisvirana kuti unyatsonyorova. Zvadaro okuitira nguva refu kubva pakupinza kusvika paanokudiridzira, toti maminitsi anopfuura manomwe. Vakadzi vakawanda panguva yakadai vanenge vasvikawo ipapo pauri kuti chaipo ipo.
Asi nzwisisai kuti kune vakadzi vakawanda vasingasvike pakutunda nekuda kwekuiswa nemboro. Ava vakawanda zvokusvika pa 65%. Vanoda kuti uku murume ari pabasa uku iwe muridzi uri kuzvikwizirirawo bhinzi nemaoko.
Zvinonzi 25% yevakadzi vanosvitswa pakutunda nemboro hombe chete, saka ngatisakasira kufungira kuti varume ndivo vane dambudziko. Pamwe ndisu. Kana uchida kuwona kuti unoita nyore here kusvitswa pakutunda nemboro chete pasina kukwizirira kabhinzi, unokwanisa kukumbira murume wako akupime kutarangana kwakaita kubva paburi rebeche (kumusoro kwakananga kuguvhu) kusvika panotangira bhinzi nechokuzasi. Kana kutarangana uku kukaratidza kuti kwakapfuura 2.5 cm, zvinoreva kuti uri munhu anonetsa kusvitsa pakutunda usina kukwizirirwa kabhinzi, panoda kukwizirira bhinzi.
Previous articleNyoro paToll Gate Part 2 – Married Woman Cheats Again
Next articleMainini vakafongora ndokuisa bhurungwa paside ndichibva ndaibairira nyoro pashebeen!